Diyaaradaha Dagaalka Mareykanka oo Duqeeyay Degaan Horjooge Al shabaab ka tirsan uu ku sugnaa – Radio Muqdisho
Diyaaradaha aan cidna wadin ee Droneska ee Mareykanka ayaa xalay saacdu geeska afrika markii ay ku beegneyd weerar dhinaca cirka ah ku qaaday meel duleydka ka ah deegaanka saakow oo ka tirsan gobolka jubada dhexe ee koonfurta soomaaliya.
Weerarka ayaa wararku waxa ay sheegayaan in lala bartilmaameedsaday horjooge sare oo ka tirsan kooxda Al-shabaab ka tirsan laakiin lama sheegin magaca qofka la weeraray.
Wazaaradda difaaca ee dowladda mareykanka war qoraal ah oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay howlgal military ka fuliyeen xalay meel u dhow deegaanka saakow oo ka tirsan gobolka jubadda dhexe ismarkaana uu ahaa howlgalkaasi mid lagu bartilmaameedsanayay horjooge kooxaha argagxisada ka tirsan.
Waaxda difaaca ee mareykanka ee Pentagon,ka oo aanu sheegin qofka sida rasmiga ah weerarkaasi loogu bartilmaameedsanayay iyo magaciisa ayaa warkeeda qoraalka ah ku sheegtay in bartilmaameedka rasmiga ah uu ahaa horjooge howdka deeganadaasi ku dhuumaaleysanayay.
Afhayeen u hadlay wazaaaradda difaaca ee mareyknka oo warsaxaafadeedka soo saaray in ay wadaan baaritaano iyo qiimeyn ku saabsan wareerkii dhinaca cirka ahaa oo ay ka fuliyeen deegaankan ka tirsan gobolka jubada dhexe qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay iyo magaca shaqsiga sida rasmi loogu bartilmaameedsaday.
Waaxda difaaca ee mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in ay qiimeynayaan natiijada howlgalka islamarkaana ay bixin doonaan macluumaad intan ka badan waqtiga dhow,waxaana dowladda mareykanka diyaaradaheeda Drones,ka ay dhowr jeer weeraro lagu bartilmaameedsanayay horjoogayaal ka tirsan kooxda al shabaab ka fuliyeen deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya.